Homelọ thelọ Google bụ mmalite nke Obere na ,lọ, mana nwere ihuenyo | Gam akporosis
Google Home Hub, ma ọ bụ Google Assistant nọ n'ụlọ gị gbanye n'ime mbadamba
Manuel Ramirez | | Noticias, Mbadamba gam akporo
Google Home Hub bụ ngwaahịa ọhụrụ sitere na nnukwu G nke chọrọ ịga n'ihu bụrụ mgbanwe nke Homelọ Google ma ọ bụ Obere Homelọ Google. Nke a bụ isi echiche maka Google Home Hub, ma ọ bụ ihe yiri ka mbadamba mbadamba na ntọala ka ị nwee ike iji olu gị na-emekọrịta ihe.
Google Home Hub bụ onye gosipụtara ugbu a maka njikwa nke niile ejikọrọ ngwaọrụ i nwere n'ụlọ gị. Akwụ bụ otu n'ime ọtụtụ puku ngwaahịa ndị a ga-ebupụta na ọtụtụ dị taa maka ị ịchịkwa.
Otu ngwaọrụ ijikwa mmadụ niile
Iji Google Home Hub anyị nwere ike ịnwe ozi ndị ọzọ Foto Google: Ndekọ ndụ. Ewezuga ọgụgụ isi ahụ dị na Foto ga-achọ foto kacha mma iji gosi gị n'ihu nnukwu ihuenyo Google Home Hub.
Ọ bụ ezie na ihe na-atọ ụtọ banyere oghere ọhụrụ a bụ soro "ya" mee ihe site na Google Assistant. Ezubere ya nke ọma ka olu gị bụ ọwa mmekọrịta yana, dịka ọ na-eme na ekwentị na ngwaọrụ ndị gara aga, yana ihuenyo dị nha, na-egosi anyị vidiyo, weebụsaịtị na ihe niile anyị ji eme mgbe anyị na-achọ Google.
Google na-agbakwunye ngwaahịa ọzọ e mere maka ụlọ na nke na-esonye na Homelọ Google na Obere ụlọ Google. N'ụzọ ezi uche dị na nke a Home Hub nwere mkpesa ka ukwuu site na isiokwu nke ihuenyo. Dị ka nnukwu G gosipụtara na ihe atụ, anyị nwere ike ịgwakọta achịcha ka anyị na-eso nkuzi vidiyo si na YouTube; ihe a niile na-enweghị imetụ ihuenyo site na iji olu anyị iji mekọrịta na Hub Hub.
Google Home Hub dị maka ịtụ ahịa maka $ 149 na ndenye ego YouTube na-akwụghị ụgwọ ọnwa isii. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta Google Home, ugbu a nzụta na-aga na Home Hub.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mbadamba gam akporo » Google Home Hub, ma ọ bụ Google Assistant nọ n'ụlọ gị gbanye n'ime mbadamba
Otu esi agbaso ihe ngosi nke Google Pixel 3